Isbarbar-dhig: Wax-qabadka Cristiano Ronaldo & Karim Benzema Ee Xili Ciyaareedkan, Midka Hoos U Dhacay Iyo Xog Muujinaysa In CR7 U Darsaday Benzema - Latest football news
Isbarbar-dhig: Wax-qabadka Cristiano Ronaldo & Karim Benzema Ee Xili Ciyaareedkan, Midka Hoos U Dhacay Iyo Xog Muujinaysa In CR7 U Darsaday Benzema
Maalmo ka hor intii aanu bilaabmin xili ciyaareedku, waxay dadku xiiso u qabeen inay arkaan Real Madrid oo uu ka maqan yahay Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale inay qiimayn ku sameeyaan laacibka reer Portugal waayihiisa cusub ee Talyaaniga iyo sida weliba sida uu Juventus ula qabsado.
Markii horyaalladu dhawr kulan socdeen, waxa soo baxday in Real Madrid ay awoodi kari laadahay inay goolal dhaliso, isla markaana ay bannaan tahay halkii Cristiano Ronaldo banneeyey, ciyaaryahannadii la filayey inay doorkiisa qaataana aanay karti u lahayn, gaar ahaan Gareth Bale oo ah laacibka ugu qaalisan taariikhda Real Madrid, kaas oo dhaawacyo soo noqnoqday iyo qaab ciyaareed liita darteed u hoggaamin kari waayey naadigiisa.
Geesta kale, Cristiano Ronaldo ayaa si fiican ay ugu bilaabantay waayihiisa Juventus, waxaana uu markiiba jabiyey rikoodho waaweyn oo ay halyeeyo kooxdaas usoo ciyaaray meel ku diiwaangashadeen, xilligana isaga ayaa ah laacibka hoggaaminaya gool-dhalinta horyaalka Serie A iyo sidoo kale midka kooxdiisaba.
Halka uu Ronaldo kaga raaxaysanayo horyaalka Serie A, waxa Real Madrid oo xaaladdu ku xun tahay hurdada ka toosay weeraryahanka reer France ee Karim Benzema oo lagu eedayn jiray inuu yahay gacan-yaraha Cristiano, waxaanu si buuxda dusha ugu riday masuuliyadda Los Blancos oo uu ka noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan xili ciyaareedkan.
Saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey, waxa uu Karim Benzema dhaliyey shan gool, waxaana uu sameeyey caawin, waxaana ay goolashaasi sabab u noqdeen inuu soo qabto tirada goolasha uu Ronaldo u dhaliyey xili ciyaareedkan, taas oo ka dhigan in labadooduba ay dhaliyeen min 17 gool oo dhamaan tartamada ah.
17-ka gool ee uu Benzema dhaliyey, dhamaantood waxa uu goolka ka toogtay diilinta goolka hortiisa, waxaanu qaab farshaxan ah shabaqa ugu hubsaday kubbaddiisa, isaga oo xasuusan inuu yahay ninka ay Real Madrid sugayso.
Haddii aynu xogtan barbar-dhigno waxqabadkii xili ciyaareedkii hore ee labadan ciyaartoy oo wada joogay Real Madrid, waxa aanu magaciisuba shaqaynaynini Karim Benzema oo waqtigan oo kale dhaliyey lix gool oo kaliya, halka uu Ronaldo ka lahaa 20 gool.
Halka uu Ronaldo ka yahay ciyaartoyga ugu magaca weyn ee horyaalka Talyaaniga waqtigan jooga, sidoo kalena ugu gool-dhalinta badan, waxa taas beddelkeeda magaalada Madrid laga sheekaysanayaa bandhig ciyaareed cajiib ah oo uu lasoo baxay Karim Benzema oo sidoo kale ku biiray liiska ciyaaryahannada ugu goolasha badan taariikhda Real Madrid kaddib markii uu dhaafay rikoodh-kii gool-dhalinta ee halyeygii Hugo Sanchez oo 208 gool lahaa, halka uu Benzema magaciisa ku qoray 209 gool.
Kaliya Lionel Messi oo dhaliyey 27 gool, ayaa ka goolal badan Karim Benzema xili ciyaareedkan, waxaana uu ka sarreeyaa Wissam Ben Yedder, Luis Suarez iyo Antoine Griezmann oo dhaliyey min 16 gool.
Haddaba Ronaldo oo waqtigan oo kale xili ciyaareedkii hore lahaa 20 gool, sidee ayey xaaladdiisa gool-dhalintu ahaan lahayd haddii uu sii joogi lahaa Santiago Bernabeu?
Su’aashan ayaa ah midda lays weydiinayo, waxaana cad in Benzema uu ka raystay Ronaldo, halka uu xiddiga reer Portugal u darsaday caawintii xiddiga reer France.
ReaL MADRID UMA RAYSTEE WAA LOO RAYSTAA HALA MADRID
HALA MADRID 👑💪
Abdirahman husien says:
Dadkii ronaldo aminsanaa hala madrid